मनकामनामाताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! हेर्नुहोस आजको राशिफल : – Khabar Art Nepal
मनकामनामाताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! हेर्नुहोस आजको राशिफल :
वि.सं. २०७५ चैत्र ०७ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१९ मार्च २१ तारिख
By खबर आर्ट नेपाल	 On ७ चैत्र २०७५, बिहीबार ०१:४६
चैत्र ०७ खबर आर्टनेपाल । काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ६:१० बजे र सूर्यास्त : साँझ १८:१५ बजे र दिनमान ३० घडी १३ पला। फागु पूर्णिमा। तराईमा होलीपर्व। वसन्त-तैलाभ्यंग। आँपका मुजुरा खाने दिवस। नालास्थित मत्स्येन्द्रनाथको स्नान (नालान्हवँ)। चँकयात। धुलँयात। गणगौरपूजा प्रारम्भ।
आजको चाडपर्व र उत्सव : फागु पूर्णिमा, तराईका जिल्लाहरूमा होली, होली पुह्नि, नाला मच्छिन्द्र नाथ स्नान, वसन्तादि, तेल लगाउने र आँपको मुजुरा खाने दिन, नालाह्नव, चँकयात, धूलयात, गणगौर पूजा प्रारम्भ, आजको मूहुर्त : घर छाउने÷ढलान गर्ने, दैलो राख्ने, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : जल दिवस, भोलिको मूहुर्त : अन्नप्राशन(पास्नी), अग्निवास(होमादि), अक्षरारम्भ, पसल थाप्ने, शिलान्यास (सामान्य), वस्त्राभरण(गुन्युचोलो), घर छाउने÷ढलान गर्ने, दैलो राख्ने,
राहु काल : दिउँसो ०१:४३ देखि ०३:१३ सम्म, यमघण्ट : बिहान ०६:१० देखि ०७:४० सम्म, गुलिक काल : बिहान ०९:११ देखि १०:४२ सम्म, काल वारवेला : दिउँसो ०३:१३ देखि ०४:४४ सम्म, रोग वारवेला : बिहान ०७:४० देखि ०९:११ सम्म
शुभ वारवेला : साँझ ०४:४४ देखि ०७:४४ सम्म, लाभ वारवेला : दिउँसो १२:१२ देखि ०१:४३ सम्म
चौथो घरको चन्द्रमाले मानसिकतामा थोरै विचलन ल्याए पनि प्रणयसम्बन्ध र प्रेमको वातावरण बन्नेछ । सन्तति पक्षको साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । घरायसी सुखको अनुकूलता हुनेछ । नातागोता र आफन्तजनसँग भेटघाटको योग छ । दीर्घकालिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ । आफन्त, नातागोता वा घरपरिवारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुनेछ । परिश्रम गरेबमोजिम आम्दानी र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाह र परामर्श प्राप्त हुनाले रोकिएको काम बन्ने समय छ । मन बढ्ने योग छ र सामाजिक मर्यादामा प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ ।
सामाजिक काममा संलग्न हुनुपर्ला । दाजुभाइ वा नजिकका मित्रबाट विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । पेसाव्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सकिने छ, आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् । आम्दानीमा कमी आउने छैन । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । अर्थलाभका अवसर आउने छन् । धार्मिक÷सामाजिक काममा प्रशंसित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुनसक्छ । परोपकारी काममा दिलचस्पी बढ्न सक्छ । दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनु पर्नेछ । मेवा मिष्ठान्न र परिकार मिल्नेछ । प्रतिष्ठा बृद्धि गर्ने समय चल्दैछ ।
दिन राम्रै भए पनि आफन्तहरूबाट भनेजस्तो सहयोग प्राप्त हुन सक्दैन । कडा मिहिनेतका कारण गुमेको प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त गर्न सकिने छ । नचाहेको क्षेत्रमा विभिन्न जिम्मेवारी वहन गर्दै दौडधूप गर्नु पर्ने दिन छ । सुरुमा दिक्क र झर्को लाग्दो महसुस भए पनि अन्त्यमा सफलता नै मिल्नेछ । तर सचेत रहनु होला, सामान हराउने वा प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा धनखर्च हुनसक्छ । अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा सामान्य रूपमा फाइदा लिन सकिने छ । बन्दव्यापारका क्षेत्रमा झिनामसिना समस्या देखिन सक्छन् । घरायसी समस्यामा समय व्यतीत हुनसक्छ । मनोरञ्जन वा खेलवाडबाट टाढा बस्नु जायज हुनेछ ।
आज झिनामसिना समस्याको सामना गर्दै निरन्तरको लगनशीलता र संघर्षपछि सफलता प्राप्त हुने दिन हो । चन्द्रमा अनिष्ट भए पनि राशिमा परेको राम्रा ग्रहको प्रभावले स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । सानोतिनो समस्याले तपाईंको उत्साहमा कमी ल्याउने छैन । नयाँ काम थाल्दा व्यवहारिक लाभ पुग्नेछ । तपार्इंको व्यक्तिगत दृष्टिकोणले दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्नेछ । दानपुण्यप्रति आकर्षित बन्नुहोला । झैझगडा र मुद्दामामिलाबाट फाइदा नै हुनेछ । आर्थिकरूपमा सबल बन्नु हुनेछ । आम्दानीका नयाँनयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन् । सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने दिन छ ।
बन्दव्यापारमा ठूलो उपलब्धी लिन सकिने समय त छैन, तर आर्थिक बलियै देखिन्छ । हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनको इच्छा जाग्ने छ, तर कामको चाप र धनको अभावले निराशा हुनसक्छ । यात्रामा सावधानी अपनाउनु होला, नत्र नरमाइलो बन्नसक्छ । घरपरिवारमा मतभिन्नता बढ्न सक्छ । रसरङ्ग र मनोरञ्जनको चाहना पूर्ण गर्ने समय आएको छ । तर कामधन्दा र व्यववायको चापले गर्दा प्रणयप्रसङ्ग र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य चिसोपन देखिन सक्छ वा पति÷पत्नी वा प्रेमी÷प्रेमिकाको स्वास्थ्यस्थिति सन्तोषजनक नहुने सम्भावना छ । चिडचिडेपन, दिकदारी र झर्कोफर्को बढ्ने सङ्केत देखिन्छ, सचेत रहनु होला ।
इण्डियन प्रिमियर लिग खेल्न सन्दीप भारततर्फ
धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत आवश्यकः डा.शशांक कोइराला